सरकारी विद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने हो? लाइन बस्नुपर्दैन, यसरी भर्नुस् अनलाइन फाराम :: PahiloPost
सरकारी विद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने हो? लाइन बस्नुपर्दैन, यसरी भर्नुस् अनलाइन फाराम
काठमाडौं : आन्तरिक स्रोतबाटै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सरकारले सर्वसाधारणसँग अनलाइनमार्फत लगानी प्रतिबद्धता माग गरेको छ।
'नेपालको पानी जनताको लगानी' कार्यक्रम अन्तर्गत ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सोमबार लगानी प्रतिबद्धता माग्न वेबसाइट सार्वजनिक गरेका छन्। जलविद्युत आयोजनाहरु आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्ने योजना अनुसार सरकारले त्यसका लागि सर्वसाधारणको पैसा प्रयोग गर्न लागेको हो।
लामो लाइन बसेर सर्वसाधारणले शेयर आवेदन दिइरहेका बेला ऊर्जामन्त्रीले लाइन नबसी विद्युत आयोजनाको शेयर जनताको हातहातमा पुर्‍याउन लागिएको बताए।
सरकारले नेपालमै रहेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका र गैरआवासीय नेपालीहरुबाट पनि नेपालको आयोजनामा लगानी गराउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसको सुरुवात गर्दै पहिलो चरणमा अनलाइनमार्फत लगानी प्रतिबद्धता मागिएको हो।
सर्वसाधारण नेपालीले अप्पर अरुण, दूधकोशी, तमोर, सुनकोसी ३, लाङटाङ, नलसिङगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे र तिला १ आयोजनामा शेयर लगानी गर्न सक्छन्।
अनलाइन फाराम कसरी भर्ने?
ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लगानी प्रतिबद्धता माग्न एउटा पेज बनाएको छ। तपाईले http://www.moenonline.moen.gov.np/login पेज खोल्नुपर्छ।
त्यसपछि तपाईंसँग लगइन मागिन्छ। तपाईं नयाँ भएकाले 'क्रिएट न्यु एकाउन्ट' मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि त्यहाँ तपाईको आधिकारिक इमेल मागिन्छ। पासवर्ड तपाईले इमेलमै प्रयोग गरिरहेको राख्नुपर्छ भन्ने छैन, जुनसुकै राख्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि पेजमा 'शेयर लगानी प्रतिबद्धता फारम भर्नुहोस्' भन्ने लेखेको देख्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेर व्यक्तिगत विवरण भर्नुस्।
त्यसपछि नागरिकताको विवरण मागिन्छ। अर्थात नागरिकता नम्बर, जारी गर्ने जिल्ला र जारी मिति। यो विवरण भरेपछि तपाईको इच्छाएको व्यक्तिका बारेमा जानकारी दिनुपर्छ। अनि तपाईको लगानीको योजनाका बारेमा सोधिन्छ। त्यसको विवरण भरेपछि तपाईले सुरुदेखि भरेको विवरण सही छ कि छैन वा त्यसमा केही हेरफेर पो गर्न चाहनु हुन्छ कि सोधिन्छ। त्यो स्टेप पार भएपछि तयार भएको फारम सबमिट गर्नुपर्छ।
यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले तपाईको विवरणका आधारमा सम्पर्क गर्छ। र आयोजना अगाडि बढ्दा त्यसमा तपाईलाई सहभागी गराउँछ। शेयर लगानी गर्न अहिले नै पैसा भने तिर्नु पर्दैन। त्यसका लागि मन्त्रालयले पछि छुट्टै सूचना निकाल्छ।
सरकारी विद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने हो? लाइन बस्नुपर्दैन, यसरी भर्नुस् अनलाइन फाराम को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।